USA: Askari dilay wiil madow ah oo shaqada ka tegay kadiba markii shacabka la dejin waayey – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Warbaahinta dalka Mareykanka ayaa baahiyay in askeriga dilay Michael Brown, shaqada booliska ee qeybta Ferguson, laga casilay, maalmo kaddib markii xeerbeegti ay go’aansadeen inaan dembi lagu soo oogin.
Askerigan, Darren Wilson, oo nin caddaan ah, ayaa shaqada ka maqnaa tani iyo markii ay toogashada ka dhacday goob lagu magacaabo Missouri, sagaalkii bishii August ee sanadkan.
Warka ka soobsan, shaqa ka tagista Darren Wilson, waxa uu soo baxayaa seddax bil kaddib dilka Michael Brown.
Askeri Wilson ayaa booliska ka mid ahaa lix-sano. Kaddib markii uu toogtay wiilka aan hubeysneyn ee madowga ahaa, oo sababtay dibadbaxyo, wuu dhuuntay, wuxuuna dib u soo muuqday markii xeerbeegti ay go’aan ka gaartay arrintiisa, aynsa sheegeen inaan la dacweyn.
Waxa uu TV ku yaalla Mareykanka u sheegay inuusan sameyn karin wax ka duwan wixii uu kala kulmay Michael Brown oo ahaa wiilka madowga ee la dilay.
Qarenkiisa ayaa u sheegay wakaaladda AP, in shaqa ka tagistiisa ay si degdeg ah u dhaqan gali doonto.